यी हुन नेपालकै सबैभन्दा अग्लो पुलबाट हामफालेर आत्महत्या गर्ने प्रेम जोडी, खुल्यो अनौठो रहस्य !
ARCHIVE » यी हुन नेपालकै सबैभन्दा अग्लो पुलबाट हामफालेर आत्महत्या गर्ने प्रेम जोडी, खुल्यो अनौठो रहस्य !
नेपालकै सबैभन्दा अग्लो कुस्मा –ज्ञादी झोलुङ्गे पुलबाट हामफालेर आत्महत्या गर्ने प्रेमिल जोडीको रहस्य खुलेको छ । पुलबाट हामफालेर आत्महत्या गर्नेमा धरान उपमहानगरपालिका ११ सुनसरीका २६ बर्षिय अकिन गुरुङ्ग र ललितपुर उपमहानगरपालिका –१४ ढिलाहिटीकी २५ बर्षिया मुना राना रहेका छन ।
पर्वतको कुस्माबजार र ज्ञादी जोड्ने मुलुककै अग्लो मध्ये एक कुस्मा पुलबाट हामफालेर शनिबार राती गुरुङ्ग र रानाको जोडीले आत्महत्या गरेको हो । पुलबाट शनिबार राती ९ बजेको समयमा हाम फालेका जोडीको शब आइबार बिहान मोदीखोला किनारबाट प्रहरीले निकालेको छ । पुलमा भेटिएको झोलामा मोबाइल, ट्रेकिङमा प्रयोग हुने खालका सामाग्रीहरु रहेका छन ।